Luthini olwakho "incwadi yokuthengisa"? Lena akuyona isihloko, ukuklabalasa mayelana nokuthi wayeqinisile yini uma umkhiqizo, okuyinto ufuna ngokushesha nokuqalisa umkhangisi. Ukuhlaselwa okwakusobala ku abathengi ezingaba, isiphithiphithi ifomu enhle kakhulu nokuphikisana ezingabazisayo "wasebenza" ekuqaleni ibhizinisi ukukhangisa, lapho abantu ongaqeqeshiwe wanqotshwa kalula ukuba nomphumela ofanayo.
Kancane kancane, umthengi izimpahla kanye namasevisi, lapho ziya ziba mandla ayegcwele emakethe, ukuthuthukisa "amasosha omzimba" ekukhangiseni, a uhlobo ukuthenga ukumelana: "Lapho ngiqhubeka bazame ukuphoqelela okuthile, kancane ngifuna uyithenga."
Ngokusekelwe kulokho "yokuthengisa lokunguko sibili '?
Abantu bafuna ukuba ukhethe futhi uthenge yini abayithandayo. Noma okungenani, kufanele ucabangele ukuthi bakhululekile ukunquma esivuna brand ethile kanye nemikhiqizo. Ukubhala ukuthengisa imibhalo nje kudingeka bayeke ukugxila kusukela ukudayiswa ukuthenga.
Omunye kumele waqaphela ukuthi wayedinga umkhiqizo othile, kufanele kuvele imizwa kudingekile ukuthi bayakwazi nokuqhuba ukwenzela senzo. Kusukela nombhali embhalweni liyadingeka kulokhu ukwenza konke kukhethwa izimpahla umthengi ukuthi lochazwe ngokunengqondo walungisiswa futhi limelela okunengqondo kakhulu.
Ukuze ababaphathise ubhala umbhalo ngempumelelo?
Ukubhala imibhalo ukuthengisa - inqubo akuyona kuphela yokudala, kodwa futhi sidinga i ehlaziyayo. Thola mculi ku okuqukethwe Inthanethi ethafeni kunzima kakhulu exchange. Kungcono le njongo zisebenze ejensi noma asebenzise usebenzisa izinsiza elihle ochwepheshe ukusebenza abalobi abangongoti tekubhala ngezihloko ezahlukene. Amasevisi ngokubhala ukuthengisa izihloko, isibonelo, has a site - umthombo ku-isimo lapho abangaphezu kuka-1,000 abalobi bayakwazi ukudala imibhalo ehlukile ibhizinisi ukukhuthazwa.
"Ingabe ngidinga lokhu? - Kuyinto ngampela "!
Yeka copywriting okhokhelwayo? Ukuthengisa umbhalo wadala, okusekelwe izidingo ezithile, hhayi nje kuphela okuqukethwe kodwa futhi ifomu. Uyabhala, ngokusekelwe nezithameli ethize. Injongo yalo iwukuba ukususa zonke ukungabaza bangahlola abathengi ezingaba lapho ukubanjwa bajwayelane umkhiqizo uthengisa.
Indlela yokufinyelela umthengi?
Ngokuya ifomu, ukusetshenziswa okubandakanya nokuloba ukuthengisa imibhalo, izinto kumele ibe ngendlela yekutsi baye basiza ukuziqhakambisa ulwazi nokuphikisana evikela izimpahla namasevisi ithengiswe. Lokhu kungaba ifomethi ezithakazelisayo, futhi isihloko okungavamile, imibhalo ethakazelisayo, okwenza innuendo ufunde kabanzi ngisho ngiphindelela itheksthi tikhatsi letinyentana.
Kumiswa isakhiwo kanye okuqukethwe kwe-athikili is ngokuhambisana umsebenzi okukhulunywa ngaye, ukudalulwa izinzuzo ezonikeza umkhiqizo uthenge kumniniyo. Ngempumelelo (nakuba kwaba kunalokho shabby) reception "ukufafaza amanxeba usawoti" lapho kuqala ucacisa ngezinto ezikhathaza ngokucacile ukuba umthengi, abese ahlinzekwa i ekahle kusho ukuze siyixazulule.
Ukubhala imibhalo ukuthengisa - kuyinto ekwakhiweni sipho esikhulu kwezohwebo kuleli fomu, okumele uthole ukubuyekeza ngokugxilile ezingqondweni nasezinhliziyweni izingqondo iningi kanti nabantu abahlosiwe. Kahle okunikelwe inhlanganisela eliyingqayizivele izimo, amanani kanye amabhonasi ukukholisa umthengi ngokunemba amkhethile kanye ukususa ukungabaza zokugcina. Njengomthetho, isiphakamiso ebhalwe kahle kwenza umfundi mayelana yokusabela elandelayo: "Mina, ngokungenangqondo senqabe babheka ithuba elinjalo, ukuthenga manje!"
Ukuze udayisele ngokushesha
Kuvele esisemqoka ingxenye ukuthengisa izihloko - esenzweni. Ingasetshenziselwa hhayi kuphela esitokisini leyo nto, kodwa eziphindiwe okuhlukile izikhathi eziningana emzimbeni sihloko.
P. S. Isimo esibaluleke kakhulu, okuyinto ivumela impahla ukusebenza isendalini - umthelela ngokomzwelo. Ziyamangalisa ku umphumela indaba umfundi - lokhu akulona nje copywriting abavamile. imibhalo Ukuthengisa zifane inkambo isithiyo, oludlula umfundi phambi wafika entanjeni engazange liyisithunzi ngokuchofoza ukungabaza "endaweni oda".
Party isitayela Chicago
Ukufaka i-Flash Player: kungani futhi kanjani?